Melon စျေး - အွန်လိုင်း MLN ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Melon (MLN)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Melon (MLN) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Melon ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $5 528 608.00
volume_24h_usd: $402 430.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Melon တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Melon များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
MelonMLN သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$18.54MelonMLN သို့ ယူရိုEUR€15.66MelonMLN သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£14.11MelonMLN သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.16.89MelonMLN သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr166.63MelonMLN သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.116.64MelonMLN သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč410.35MelonMLN သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł68.98MelonMLN သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$24.66MelonMLN သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$25.69MelonMLN သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$415.01MelonMLN သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$143.71MelonMLN သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$99.26MelonMLN သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1389.56MelonMLN သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3127.31MelonMLN သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$25.4MelonMLN သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$27.84MelonMLN သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿577.45MelonMLN သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥128.93MelonMLN သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1956.44MelonMLN သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩21992.3MelonMLN သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦7204.34MelonMLN သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1360.83MelonMLN သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴513.85
MelonMLN သို့ BitcoinBTC0.00157 MelonMLN သို့ EthereumETH0.0464 MelonMLN သို့ LitecoinLTC0.309 MelonMLN သို့ DigitalCashDASH0.182 MelonMLN သို့ MoneroXMR0.197 MelonMLN သို့ NxtNXT1326.35 MelonMLN သို့ Ethereum ClassicETC2.57 MelonMLN သို့ DogecoinDOGE5216.76 MelonMLN သို့ ZCashZEC0.191 MelonMLN သို့ BitsharesBTS708.33 MelonMLN သို့ DigiByteDGB685.15 MelonMLN သို့ RippleXRP59.91 MelonMLN သို့ BitcoinDarkBTCD0.623 MelonMLN သို့ PeerCoinPPC65.73 MelonMLN သို့ CraigsCoinCRAIG8239.94 MelonMLN သို့ BitstakeXBS771.18 MelonMLN သို့ PayCoinXPY315.59 MelonMLN သို့ ProsperCoinPRC2268.13 MelonMLN သို့ YbCoinYBC0.00971 MelonMLN သို့ DarkKushDANK5798.44 MelonMLN သို့ GiveCoinGIVE39137.96 MelonMLN သို့ KoboCoinKOBO4024.29 MelonMLN သို့ DarkTokenDT17.08 MelonMLN သို့ CETUS CoinCETI52186.35
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 06 Aug 2020 15:15:02 +0000.